Rise Endorsements — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
"Trip rakanyorwa bhuku Ndinofunga wose wechiduku anofanira kuverenga. chido chake Jesu chizvarwa ichi kunouya kuburikidza noruzha uye zvakajeka papeji ose. Handikwanisi kumirira kuona matambudziko mashoko aya ane pamusoro chizvarwa kuti nzara chinangwa. "
- Lecrae, Grammy awarding- kuhwina Artist @lecrae
"Rise ndiwo tisaone bhuku kuti inobudisa mwoyo netsika dzedu. Pandakangopedza akakanhonga ndaisakwanisa akaiisa pasi. Trip nezvimhingaidzo kuti REAL, uye anoratidza iwe sei kurarama upenyu hwako chive akura munyika nhasi. averengwe Great. "
- Sam I, NFL linebacker, ruyamuro @thesamacho
"Trip akanyora bhuku ndinoda ndingadai waverenga pandaiva muduku. ake chido, njere, uye chido kupikisa chizvarwa chevechiduku testamendi kuti basa kuita kwaMwari kuburikidza Trip uye basa anogona kuita kubudikidza nesu tose. "
- Kirk Franklin, Grammy mubayiro- kuhwina multi-Platinum yakarekodwa Artist @kirkfranklin
"Ndakada kuverenga Rise. Kakawanda mubhuku rino ndakazviwana medi- tating pamusoro mapeji ndaverenga navo. Ndakakurudzirwa, akafuridzirwa, uye akashora yose nzira kuburikidza. Netsika anotitarisira kuti kutambisa nguva asi Mwari anoda kuti tishandise nguva yedu zvazvinoita pasinei nezera redu. Izvi zvinoshamisa iverengwe vaya vanoda kushandisa nguva yavo nokuchenjera uye mutsauko Umambo. "
- Justin zvaJehovha Resoluciones, NFL achimhanya shure @JForsett
"Saka kazhinji pezvatinotaura kuda kuita musiyano, asi hatidi chaizvoizvo simuka uye kuita chimwe chinhu. Buddy My, Trip Lee, akanyora bhuku achavhenekera moto pasi chizvarwa wakadzidzisa kutora nyore nzira yokubuda. Ari akashora nesu 'simukai' uye kurarama munyaya kuti akasika naMwari kwatiri. Ndinoziva Ndinenge kuzvirumbidza bhuku rino vose Ndinoziva. "
- Stephen Curry, NBA mutambi @ stephencurry30
Unogona kutenga bhuku idzva Trip kuti, simuka, kwose mabhuku dzinotengeswa. Ona zvimwe panguva Risebook.tv
Kelvin masiala carpinteyrovru • Ndira 26, 2015 pa 2:42 pm • pindura
Ndiri Zambia Lusaka, apo zvichava kusvika pano?
Innocent • Ndira 26, 2015 pa 2:42 pm • pindura
Kana kuri kuti Africa
WIZEMAN • Ndira 28, 2015 pa 4:11 ndiri • pindura
Zambia tiri kumirira
Kemi iDream • Ndira 28, 2015 pa 11:47 ndiri • pindura
Ini akasundwa kutenga, Simuka rokutsigira hama wechiduku kuparadzira vanoshingairira Mwari. Mushure kuverengera, Ini asi ainzwa Tug kutenga bhuku. Izvi mangwanani pashure kuritenga, Ndakakwanisa kuverenga mberi akanga nemhosva kwazvo! Ini ndiri zvikuru chaizvo kuverenga mashoko uye anoonga kuti vakateerera Jehovha kudhonza kwayo ini kutsigira chikonzero.
Ndaitya kuti bhuku rakanga dzakagadzirirwa kune munhu muduku asi ndinotenda kuti munhu anogona kuwana chinhu kubva mubhuku rino. Ini akakurudzirwa kubva nokungoverenga mapeji okutanga shoma.
Thanks Trip nokuti ani ndimi uye zvauri kuita kuti Umambo!
Phil • Kukadzi 3, 2015 pa 1:01 ndiri • pindura
Pum Mirira To Recceive Copy My In Uganda!
Tireo • Chikunguru 17, 2015 pa 11:01 ndiri • pindura